Sida loo Kala Bixinayo Wabiga Saladao May Badbaadinayo Buenos Aires - Ellicott Dredges
Sidee daadinta Webiga Salado u saameysaa Buenos Aires? Taariikhda dhaw waxay cadeysay in roob aad u badan oo ka da'ay gobolka hoose hoose ay sababeen in wabiga Salado uu si isdaba joog ah fatahaada khatar ugu galiyo bulshada beeraha. Ilaa dhowaan wabiga si wanaagsan looma ilaalin. Tani waxay sababtay daadad hore inay dhacaan. Maalgelintii ugu dambeysay waxay hadda suurtogal ka dhigaysaa in lagu bixiyo hagaajinta wabiga iyo aagagga ku xeeran iyo helitaanka saxda ah qalabka qalalan taas oo gacan ka geysan doonta in la xakameeyo fatahaadaha suurtagalka ah iyada oo webiga dib loogu celiyo xaaladdiisii ​​dabiiciga ahayd.
Webiga Salado iyo Saameyntiisa
Laga soo bilaabo 2000 ilaa 2017, in ka badan 800,000 oo hektar oo dhul ah ayaa waxyeello ka soo gaadhay guud ahaan Buenos Aires, Argentina, taas oo ka dhalatay daadadka wabiga Salado. Magaalada Buenos Aires waa caasimada Arjantiin waana magaalada ugu weyn wadanka. Bulshada kobcaya waxay ku taal gobolka Buenos Aires, oo ku taal meesha loo yaqaan 'Rio de la Plata estuary'. Waxa dad badan oo shisheeyaha ah aysan ogaan karin ayaa ah in gobolka Buenos Aires uu yahay beel weyn oo beeraley ah. Qiyaastii 20% ka mid ah hadhuudhka iyo hilibka Argentina waxay ka yimaadaan gobolka waxaana loo arkaa inay aad muhiim ugu yihiin dhaqaalaha qaranka. Inta badan dhulka gobolka wuxuu hodan ku yahay nafaqooyinka, laakiin sidoo kale waa mid aad u fidsan oo u nugul xaaladaha cimilada daran ee keenay dib u soo noqoshada abaaraha iyo daadadka.
Taxanaha Ellicott 1270 Dragon® Dredge
Waxaa jira dhowr durdurro yaryar, estuaries, iyo wabiyaal ku yaal agagaarka Buenos Aires. 40-kii sano ee la soo dhaafay, celceliska roobka Buenos Aires wuxuu kordhay 20%. Roobka dheeraadka ah ayaa sababay in Wabiga Salado uu fataho. Meelaha xadka la leh webiga sida Salado River ayaa u nugul fatahaadaha xilliyada roobabku da'ayaan. Muddo dhowr sano ah, Wabiga Salado wuxuu ururiyey qalab kala duwan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah, oo urursaday tiro badan oo ah daamur iyo dhoobo. Marka webiga aan si ku filan loo ilaalin, qashinka ayaa soo ururi doona waqti ka dib, taas oo u horseedi doonta wabiga inuu caqabad ku noqdo. Tallaabadani waxay xaddideysaa awoodda webiyada inay si dabiici ah u soo bandhigaan biyo qulqulaya oo keenaya heerarka biyaha inay sare u kacaan, taasoo dhalisa daadad
Muddo dhowr sano ah, hoggaamiyeyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta ayaa ka wada hadlay fikrado kaladuwan oo qallafsan iyo xallinno sida ballaadhinta wabiga iyo qoditaanka kanal qoto dheer oo rajo ka qabay yareynta fatahaadda hase yeeshe ma aysan awoodin inay soo aruuriyaan maaliyaddii loo baahnaa si ay u daboolaan qiimaha baaxada noocan oo kale ah. mashruuc-qulquleynta webiga illaa goor dhow.
Laba taxane 1270 Dragon® Dredges shaqada ka socota Wabiga Salado
Bishii Abriil ee 2017, Bangiga Adduunka wuxuu oggolaaday a $ 300 milyan oo deyn ah fama mashruuca kahortaga fatahaada. 18-kii bilood ee la soo dhaafay, qandaraaslayaal fara badan oo qodaya ayaa waqti muhiim ah ku qaatay ka shaqeynta hagaajinta xaaladaha daadka ee aagga. Illaa iyo hadda qandaraaslayaashu waxay ka saareen in ka badan 5.23 milyan yd³ (4 milyan m³) oo ah ciideed iyo ceel dhoobo ah Webiga Salado iyaga oo isticmaalaya taxane qashin ah.
Si gacan looga geysto xakameynta fatahaadda ka dhacay gobolka, shaqaalaha ka gooyey Helport iyo Chediack (UTE) waxay doorteen inay isticmaalaan laba Ellicott Series 1270 Dragon® cutter nuugista qulqulka ku habboon noocan ah daadinta wabiga codsi. Qulqulka '1270 Dragon® dredge' wuxuu awood u leeyahay inuu gaaro qoto dheer oo qoto dheer ilaa '50' (15 m). Sidoo kale, qulqulkaan dhexdhexaad ah wuxuu kujiraa bamka '18' wuxuuna ku qalabeysan yahay labo matoorada naaftada ah, oo mid kamid ah loogu talagay bamka dredge ee wax soo saarka ugu fiican.
Malaha caqabadda ugu weyn ee haysata shaqaalaha ka shaqeeya mashruucan waxaa ka mid ah helitaanka xadidan ee wadooyinka wasakhda ah marka roob da’o maadaama wadooyinka daadku ay dhib ka dhigayaan gaarista aagagga qulqulaya. Gaaritaanka webiyada ee deegaanka ku xeeran ayaa sidoo kale cadeeyay in ay adagtahay in la galo aadna u xadidan. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo caqabadahaas jir ahaaneed ay jiraan, haddana duruufaha Ellicott Dragon® way fududahay in la kala furfuro oo dib loo abaabulo oo u oggolaanaya shaqaalaha inay u leexiyaan meelaha ay adag tahay in la gaaro webiga. Duruufaha noocaan oo kale ah aad ayey muhiim u tahay in la helo hanaan lagu kalsoonaan karo oo awood u leh inuu ka gudbo caqabadahaas adag.
In kasta oo daadinta Webiga Salado aysan dammaanad qaadi doonin daadadka mustaqbalka ma dhici doonno, waa mid ka mid ah qaababyada ugu wax-ku-oolka badan si loo yareeyo ama loo yareeyo daadadka mustaqbalka. Marka webiga dib loogu celiyo xaalad dabiici ah oo dheeraad ah iyadoo laga saarayo wasaqda xad-dhaafka ah, biyaha hadda socda waxay ku socon doonaan dariiqyadooda dabiiciga ah xawaare dabacsan. Intaa waxaa u dheer, ciidda ayaa laga soo aruuriyay dadaallada qulqulka webiga markaas dib ayaa loo soo celin doonaa oo loo isticmaali doonaa in lagu wanaajiyo dhulka hooseeya, iyada oo la xoojinayo kor u qaadista dhul-gariirka, sidaas oo kale ayaa gacan ka geysanaysa yareynta fursadaha daadadka ku soo noqonaya ee bulshooyinka beenta hooseeya.
Ku Bilow Mashruucaaga Biyo-goyska ee Ellicott